Archive du 20190927
Hanitra Razafimanantsoa Fanosihosena lalàmpanorenana io “Governora” io
Marina fa te hanao zavatra ny filoham-pirenena amin’izao fotoana izao, kanefa ny zavatra atao rehetra dia tokony hanaraka ny lalàmpanorenana sy ny lalàna velona, hoy ny mpahay lalàna sady
Rivo Rakotovao “Ny lalàmpanorenana no ambony indrindra”
Vao handinika ny didim-panjakana momba ny fanendrena ireo governoram-paritra ny filohan`ny Antenimierandoholona, Rivo Rakotovao.
Fanjakana tsara tantana Hanampy antsika i Norvezy
Taorian’ny fisoloana tena ny filohan’ny Repoblika nandritra ny fihaonamben’ny Firenena Mikambana dia nihaona tamin’ny praiminisitra Norveziana, Erna Solberg, ny praiminisitra Ntsay Christian ny alarobia lasa teo.
Kariera Bekisopa Tafiditry ny politika maloto
Niakatra eto Antananarivo ary mitaraina ireo mpitrandraka madinika noho ny afitsoky ny andian’olona milaza ho avy amin’ny fitondram-panjakana miaraka tamin’ny polim-pirenena misahana ny harena ankibon’ny tany.
CNaPS Sport Madagasikara Vonona handresy ny Ts Galaxy Fc amin’ny sabotsy izao
Vonona tanteraka ny handresy sy hanilika ny ekipan’ny Ts Galaxy Fc avy atsy Afrika Atsimo, eo amin’ny lalao miverina amin’ny fiadiana ny “Coupe de la confederation africaine” amin’ny sabotsy 28
Tahaka ny akoho ny Malagasy?
Rehefa izy no misioka dia voromanga, fa rehefa ny hafa dia vorondolo ! Io no mamaritra ny fomba ny fihetsika asehon’ny mpitondra ankehitriny. Mora ny nanenjika, namotika, nandrava, nandoro,…
Fanampiana ny reny sy ny zaza Hiara-kiasa ny Pavillon Sainte Fleur sy ny gazety Jejoo
Tontosa omaly tetsy amin’ny Phô Resto tetsy Bel’Air Ampandrana ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasa lehibe eo amin’ny gazety Jejoo sy ny Pavillon Sainte Fleur.
Trano 10 may tao Antsirabe Ahiana ho tetika hakana tany
Tato anatin’ny iray volana dia efa nahatratra 5 ny hain-trano tao Antsirabe tao.
Firafitry ny vidin’ny herinaratra Apetraka amin’ny taona 2020
Tsy maintsy hampitoviana ny firafitry ny vidin’ny herinaratra manerana an’i Madagasikara araka ny fanazavana nentin’ny minisitry ny angovo, ny rano ary ny akoranafo Vonjy Andriamanga.
Fianarantsoa Toaka 2653 litatra sy rongony 20 kg nodorana
Olona felo tra-tehaky ny mpitandro filaminana no anisan’ny atidohan’ny aferan-drongony 20 kilao sy toaka 2653 litatra, tamin’ny lalan’i Fianarantsoa.
Ilanivato Tra-tehaka teo am-pikasana hanolana ilay jiolahy
Rehefa avy nidaroka ilay raim-pianakaviana ireo telolahy dia nikasa hanolana ny ramatoa vadiny no henon’ny mpitandro filmianana. Efa samy tra-tehaky ny polisy avy ao Ilanivato ireo olon-dratsy telo lahy.